Kazuo Ishiguro oo madxafka Rinkeby kula kulmay ardeyda dugsiga dhexe Rinkeby - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sumeya ayaa dhigata fasalka 8:aad ee iskuulka Rinkeby. sawir: Mona Ismail Jama/SR
Kazuo Ishiguro oo madxafka Rinkeby kula kulmay ardeyda dugsiga dhexe Rinkeby
Gabay: "Rinkeby waa xaafad la isku gacan qabto"
La daabacay tisdag 12 december 2017 kl 16.35
Qoraaga Kazuo Ishiguro oo sannadka 2017 ku guuleeystay biladda nobeelka suugaanta sannadka ayaa sidii caadaduba ahayd booqasho ugu tagay maanta oo salaasa ah madxafka buuggagta ee xaafadda Rinkeby dhallaanka dhigta dugsiga hoose dhexe ee iskuulka Rinkeby oo ku yaala isla xaafadda.
Waad ku mahad-san tihiin sida aad iila qeybsateen. Waxba ha ka welwelina mustaqbalku wuxuu ku jiraa xaafadahan, sida uu sheegay qoraagu oo ku sugnaa madxafka buugagta ee xaafadda Rinkeby.
Ardeyda dhigata dugsiga Rinkeby ayaa sannadka akhriyay oo sawirro ku mitaaley buugga qoraaga ee "Never let me go – marna ha ii ogolaan inaan tago". Halka ey dhanka kale ardeydu u akhriyeen qoraaga gabayo ey iswiidhish ku qoreen. Waxaa ka mid ahaa gabay ku saabsanaa in aaney xaafaddu sida looga warrammo ahayn, balse ay tahay xaafad wanaag-san oo ey ku dhaqan yihiin dad is garab taagan oo gacan isku fidiya kolka ey isu baahdaan. Mid ka mid ah gabayadii lagu soo dhoweeyey qoraaga Kazuo Ishiguro:
- Haddaba saaxiibadeydiiyeey. Rinkeby waa xaafaddeydii duleedka.
- Waxaa laga helaa pitzza-da iyo kebaabka ugu wanaag-san.
- Halka waxaa ka jira is gacan qabad.
- Halka waxaan ku dareemaa gurigeeygii.
- Halka waxaa jooga dadkeeygii.
- Waxaa halka yimaada dad cusub.
- Rinkeby waa muqdisho oo la xumeeyey.
- Laakiin dhammaan waxa saxaafaddu sheegto, maahan midda aan arko.
- Waxaan arkaa wada-jir, is-jecli iyo farxad .
Ilhaan Cilmi, waa gabar dhigata fasalka siddeedaad ee dugsiga hoose dhexe ee Rinkeby. Waxay ka mid ahayd ardeydii soo dhoweeyey qoraaga Kazuo Ishiguro oo ku guuleeystay biladda abaal-marinta nobeelka ee sannadka 2017. Ilhaan Cilmi oo ka warrameeysay howlaha ey ka qabanayeen madxafka buugagta ee Rinkeby ayaa tiri:
-Maanta waxaan dareemayaa farxad. Waxaan halka kula kullaney qoraagii sannadka ku guuleeystay biladda nobeelka ee sugaanta. Annagoona wax ka soo akhrinney buugagtiisii, sida ay sheegtay Ilhaan Cilmi oo ku sugneeyd madxadka buugagta ee xaafadda Rinkeby oo uu booqasho maanta oo salaasa ah sidii horayba caadadu u ahayd uu ku tagay qoraaga Kazuo Ishiguro.